Psychoanalysis amin'ny psikology - iza no mpanorina, psykolojika malaza sy maoderina, hevitra fototra, fampiofanana, boky, sarimihetsika
Psychoanalysis - inona moa izany, ireo fepetra fototra sy fomba fiasa
Ny psychoanalysis amin'ny fomba fitsaboana aretin-tsaina dia niainga tany Eorôpa tamin'ny faramparan'ny taonjato XIX. ary hatramin'ny voalohany dia voatsikera mafy tamin'ny mpiara-belona tamin'i Z. Freud, indrindra noho ny fampahalalana voafetra ny toetran'ny olona amin'ny fiara: Eros (fiainana) sy Thanatos (fahafatesana), saingy misy mpanaraka sy mpianatra izay nahita ny psychoanalysis avy amin'ny lafiny samihafa.
Inona no atao hoe psychoanalyse?
Izay nanorina psychoanalysis - ity fanontaniana ity dia tsy manontany olona hafa lavitra ny fahalalana ara-tsaina. Ny mpanorina ny psychoanalysis dia Zoo Freud, psikanalisista österiana, izay mpandova ny fiainany nandritra ny androny. Ny psychoanalysis (psychoanalyse etsy ambony, psyche grika - fanahy, fanadihadiana - vahaolana) dia fomba iray amin'ny fitsaboana marary saina ( neuroses , hysteria). Ny fototry ny fomba fitsaboana ny eritreritra, ny nofinofy ary ny nofinofy, izay asehon'ny psychoanalyst.
Psychoanalysis amin'ny psikology
Nandritra ny vanim-potoanan'ny fitsaboana ara-psikônaly (XIX - fiandohan'ny taonjato XX) dia naharitra taona maromaro ary tsy mora ho an'ny olon-drehetra, ny psikanalisme moderne ankehitriny dia fomba fohy (15 hatramin'ny 30 sessions 1 - 2 roubles isan-kerinandro). Tany am-boalohany, ny psychoanalysis dia tsy natao afa-tsy tao amin'ny toeram-pitsaboana (fifantohana amin'ny sivily) amin'ny fitsaboana ny neuroses, amin'izao fotoana izao amin'ny fanampiana an'io fomba io dia azo atao ny miara-miasa amin'ny fahasamihafana ara-psikolojika samihafa.
Fitsipika fototra amin'ny psychoanalysis:
Ny fitondran-tenan'ny olona dia mifototra amin'ny fisainana tsy misy antony tsy fantatra, matetika avy amin'ny fiandohan'ny fampandrosoana (toe-javatra mampalahelo ny fahazazana);
Ny fahatsiarovan-tena amin'ireo fampihorohoroana ireo dia mandrisika ny fiarovana fiarovana amin'ny fanoherana;
ny fifandirana eo amin'ny fitaovana am-pieritreretana sy ny famoretana ao anaty fitarihana tsy mitombina mankany amin'ny neuroses, ketraka;
ny fanatanterahana ny zava-mitranga amin'ny tsy fahatsiarovan-tena, miaraka amin'ny fanampian'ny mpitsabo, dia manafaka ny marary amin'ny fitaoman'ny fitaovana tsy mitongilana ary mitarika amin'ny fahasitranana.
Ny psychoanalysis an'i Freud
Taorian'ny taonan'ny fanaraha-maso ny marary dia nanamarika i Freud fa ny fiheveran'ny tsy fahatsiarovan-tena dia miankina amin'ny toe-tsaina, ny fitondrantenan'olombelona. Noforonin'i Freud ny rafitry ny psyche tamin'ny taona 1932, ary nampidiriny tao anatin'izany ireto singa manaraka ireto:
Id (io) no faritra tsy mahatsiaro tena amin'ny fiainana sy ny fahafatesana.
Ego (I) - fieritreretana ny saina, fandrosoana fiarovana fiarovana).
Superego (Super-Self) dia sehatry ny fitsangatsanganana, sivana ara-moraly (fampidirana ny rafitra nomena ny ray aman-dreny).
Ny fomba fiasan'ny psychoanaly momba ny psychoanaly tao amin'ny ambaratonga voalohany dia nampiasa ny hypnose mba hanesorana ny tsy fisian'ny fitaovam-piadiana, ny mpitsabo aretin-tsaina avy eo dia nandao azy ireo ary nampihatra ny hafa tamim-pahombiazana amin'ny psykolojia maoderina:
fikarohana momba ny antony manosika amin'ny alalan'ny fikambanana malalan'ny marary;
fanadihadiana momba ny "fanoherana" sy "fampitaovana";
Ny Psychoanalysis an'i Jung
Ny psikanalisiana jiosy na ny psikolojika mifantoka Jung (mpianatra iray tena tian'i Z. Freud, izay nahitana fiantraikany mahatsiravina noho ny fomba fijeriny momba ny psychoanalyse) dia mifototra amin'ireto fitsipika manaraka ireto:
Ny lehilahy tsy mahalala ny saina amin'ny toe-javatra mahazatra dia mitombina.
Olana vokatry ny tsy fitoviana no miteraka olana, mitarika ho amin'ny fipoiran'ny komplexa izay mitondra fiantraikany ara-pihetseham-po, izay navotsotry ny psyche amin'ny tsy fahatsiarovan-tena.
Ny fiovan-javatra - ny dingan'ny fahatsiarovan'ny marary ny maha-tokana azy sy ny maha-izy azy (mampirisika ny fanasitranana), ny "lalana ho an'ny tenany", dia tanterahana amin'ny fanampian'ny psychoanalyst.
Jacques Lacan dia mpitsabo psykôlômanina frantsay, tsy hita isa amin'ny endrika psychoanaly. Lacan dia niantso ny tenany hoe Freudian ary nanipika tsy an-kiato fa ny fampianaran'i Freud dia tsy voamarina tanteraka ary zava-dehibe ny mamerina mamaky ny asa sorany foana mba hahatakarana ny heviny. Lacan dia naniry ny hampianatra ny psychoanalysis amin'ny endrika am-bava, amin'ny seminera. Scheme "Imaginary - Symbolic - Real" Lacan dia nihevitra ny fototra:
sary an-tsaina - famantarana ny olona iray (sehatra fitaratra);
famantarana - ny fahasamihafana, ary ny fahatsiarovan-tena amin'ny lafiny iray amin'ny endrik'ilay hafa, ahitana ny marika;
Tena - Nino i Lacan fa azo atao amin'ny trauma ny fivoriana iray amin'ny tena izy.
Psychoanalysis tsy misy pentina
Ny psychoanalysis klasika - ireo hevitra fototra dia nianjera tamin'ny filozofa frantsay sy mpanoratra J.P. Sartre, ilay namorona ny tsikera momba ny psychoanaly ny fisian'ny psychoanaly sy ny Libido Freudiana dia nosoloana ny safidy tany am-boalohany. Ny dikan-teny manan-danja indrindra amin'ny fanadihadiana isam-batan'olona dia ny hoe olona iray dia tsy mivadika, ary misy dikany, amin'ny fotoana rehetra mifidy ny tenany amin'ny fifandraisana amin'ny maha-izy azy. Safidy - izany no toetra tena izy. Miala amin'ny fifidianana ny sanda.
Ny psychoanalysis amin'ny andro ankehitriny dia niova ny fitantanana ny marary, ary koa ny karazana fitsaboana ampiasaina, saingy mbola nampiasaina ny teknika fototra:
Ny fomba fiasa fikambanana malalaka. Ny marary dia eo am-pandriana ary feon'ireo hevitra rehetra tonga ao an-tsaina.
Fomba fanazavana ny nofinofy. Ny fomba tiany indrindra nataon'i Z. Freud, izay nolazainy fa nofinofy no lalana mankany amin'ny tsy fahatsiarovan-tena.
Ny fomba fandikana. Ity teknika ity dia ahafahanao mitondra ny tsiranoka tsy mahatsiaro ho amin'ny fahatsiarovan-tena. Ny marary (analysand) dia milaza, ary ny psychoanalyst dia mamakafaka sy mampita ny dikany, izay naolina na tsia, ary misy zava-mitranga mifandraika amin'ny heviny na tsia, na tsy raisin'ny marary.
Ny psychoanalysis ortodokan'ny olona na Freudianism dia mifototra amin'ny teknika fototra nataon'i Z. Freud. Amin'izao vanim-potoana izao, dia zara raha ampiasaina amin'ny endrika madio amin'ny fitsaboana izy io, indrindra indrindra ny neo-Freudianism - ny fampiasana teknika amin'ny fomba isan-karazany. Ny tanjon'ny psychoanalysis klasika dia ny hamaha ny fifandirana anatiny, ireo rafitra efa niforona hatramin'ny mbola kely. Ny tena fomba fiasan'ny Freudianism dia ny fivoahan'ny fikambanana malalaka:
Ny marary dia atolotra tsy misy fandraisana anjara amin'ny lojika hilaza izay rehetra tonga ao an-tsainy, na ireo zavatra mahamenatra aza;
Ny mpitsabo dia mamaky ireo derivan'ny tsy fahatsiarovan-tena, ary amin'ny endrika azo takarina dia mitondra ny tena dikany amin'ny marary.
Ny psychoanalysis amin'ny vondrona dia fomba iray mahomby amin'ny fampiasana fomba fisainana psychoanalytika. Ny vondrona psychotherapy dia manampy amin'ny:
fampandrosoana ny fiaraha - miory amin'ny alalan'ny fiaraha-miory amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny vondrona, mizara ny alahelony sy ny traikefa ara-tsaina;
fankasitrahana ny olombelona.
Ny psychoanalysis ny vondrona - no nampidirin'ny mpandinika psychoanaly T. Barrow tamin'ny taona 1925. Ny fihaonan'ny tarika psychotherapy amin'izao fotoana izao dia fihaonana indray mandeha isan-kerinandro mandritra ny 1.5 - 2 ora. Ireo tanjon'ireo vondrona fandalinana:
mamorona sehatra azo antoka ho an'ny mpikambana ao amin'ny vondrona, izay ahafahanao miresaka malalaka momba ny fanaintainana;
Famantarana ny voina miafina miafina;
amin'ny alalan'ny halalin'ny fifandraisana ny fanapahan-kevitra amin'ny fifanoherana sy ny fifanoherana anatiny.
Ny psychoanalysis amin'ny andro ankehitriny dia miova amin'ny vanimpotoana. Psykolojista sovietika V.A. Ganzen dia manangana matrices ara-panahin'ny rafitra, eo amin'ny fotony ny mpianatra VK Tolkachev dia manangana sehatra 8 (karazana) an'ny psyche. Hatramin'izao, ao anatin'io fitarihana io i J. Burlan no miasa. Rehefa mandroso avy amin'ny rafi-pseudo-psychoanalysis, ny tsirairay dia manana fahefana iray, iray amin'ireo sehatra 8:
Ny fandalinana teknika sy teknika ara-psikolojika dia tsy azo atao raha tsy mamaky ny zavatra vita an-tsoratra. Ny boky tsara indrindra momba ny psychoanalysis:
" Psychoanalysis humanistes humanist " E. Fromm. Ny antolojia novolavolan'ny manam-pahaizana alemana iray dia ho liana amin'ny mpianatra ao amin'ny oniversite maha-olona mianatra momba ny psychoanalysis. E. Fromm dia mandinika ireo trangan-javatra fanta-daza fanta-daza amin'ny psychoanaly momba ny kompleman Electra sy Oedipus, ny fanasitranana, ny antony manosika ny saina.
" Ego sy ny rafitry ny fiarovana ara-tsaina " A. Freud. Ny boky dia ilay zanaky ny psikônaly malaza, izay nanohy ny asan'ny rainy teo amin'ny sehatry ny psychoanalysis ankizy. Ity tantara ity dia manoritsoritra fomba fanao vaovao hanehoana ireo traikefa ara-pihetseham-pon'ny ankizy iray.
" Archetype sy Symbol " nataon'i K.G. Jung. Ao amin'ny olona tsirairay, dia miafina ireo areti-potan'ny tsy mahatsiaro saina: olona, ​​Anima sy Animus, Shadow, Self ary Ego.
" Mihazakazaka miaraka amin'ny amboadia " Ny votoatin'ny vehivavy amin'ny angano sy ny angano. Estes. Ny tandindona psychoanalytika, miorina amin'ny fanadihadiana ny tales. Ny mpanoratra dia manoro hevitra fa ny vehivavy dia mijery ao anatiny ary mahita ny ampahany voajanahary, mahavokatra sy tsy voafehy izay efa hadino.
"Ny lainga eo am-pandriana " nataon'i I. Yal. Ny manam-pahaizana malaza iray dia mahomby amin'ny asan'ny mpanoratra. Fotoam-pihetseham-po an-tsokosoko sy zava-mampihetsi-po, nalaina tamin'ny fomba fanaony - ny mpamaky mahita fa ny psychoanalyst dia olona iray ihany amin'ny olana mahazo azy.
Filma momba ny psychoanalysis
Ny psychoanalysis - lohahevitra iray mahaliana ho an'ireo tale manan-danja maro sy ireo izay te-hahafantatra ny tenany momba ny sarimihetsika ara-psikolojia dia tena liana be, matetika rehefa avy nijery filma toy izany, dia misy fomba fijery manokana manampy amin'ny famahana ny olana. Filma momba ny psychoanaly, mendrika hodinihina:
"Zanak'room / La stanza del figlio" . Manana ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana i Giovanni psychoanalyst Giovanni, mangataka amin'ny asany izy, saingy nisy zava-doza nitranga - maty ny zanaka ary nitady hevitra i Giovanni.
«Psychoanalyst / Shrink» . Henry Carter dia manam-pahaizana ara-psikolojika mahomby, ho azy eo amin'ny lisitry ny olo-malaza, fa amin'ny fiainany manokana dia tsy malama ny zava-drehetra. Ny vadin'i Henry dia mamono tena, ary ny manam-pahaizana dia tonga amin'ny famaranana fa tsy afaka manampy ny marary intsony izy.
"Ny fomba mampidi-doza . " Ny fehezin'ilay horonantsary dia mifototra amin'ny fifandraisana misy eo amin'i Z. Freud sy ny pupil K. Jung ary ny marary Sabina Spielrein.
"Mpitsabo / fitsaboana" . Ny andian-tantara, isaky ny andian-tsoratra amin'ny fitsaboana aretin-tsaina, amin'ny fampiasana teknika isan-karazany sy ny psychoanalysis eo amin'izy ireo. Ny filma dia mahasoa ho an'ny psikology sy ho an'ny olona liana amin'ny psikology.
"Rehefa nitomany i Nietzsche . " Ny sarimihetsika momba ny fanabeazana ny psykônalyaly any Eorôpa, dia mifototra amin'ilay tantara nosoratan'i Irvin Yalom, pseudo-psychoanaly malaza.
Ny psikology amin'ny tsy firaharahiana
Antony 10 hahasambatra
Fehezin-tena ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe ho toy ny fomba fanitsiana ara-tsaina
Theodicy - no olan'ny teodicy manan-danja amin'ny tontolo maoderina?
Ny lehilahy dia misotro isan'andro - torohevitry ny psikology
Iza avy no miditra sy mivoaka?
Ny psikolojian'ny harena - mora ve ny manintona vola?
Ahoana no hitianao ny bika aman'endrinao?
Bakom-biby vita amin'ny ovy
Mpankafy 10 izay manam-bady hanambady ny sampy!
Souion onion miaraka amin'ny croutons
Endometritis amin'ny alika
Salady krabina miaraka amin'ny katsaka sy ny kôkômbra
Miresaka momba ny Reese Witherspoon vohoka ho an'ny efatra ny tsirairay
Miakanjo volom-borona - karazam-pirazanana miaraka amin'ny karazan-trondro
Jim Carrey maniry amin'ny alàlan'ny fitsarana hanafoana ny fiampangana rehetra momba ny fahafatesan'i Katriona White
Divay mulled - fomba iray ahandro sakafo ao an-trano
Lolo amin'ny rindrina
Museum of Art and Culture "Patak"
Kiraro kapa matevina amin'ny kirany
Capricorn sy Aquarius - fifanarahana amin'ny fiainana rehetra
Sakafo ho an'ny papay
Glycine mandritra ny fitondrana vohoka